एप्पलले किन हटायो फेसबुकको सेक्योरिटी एप ? — Himali Sanchar
एप्पलले किन हटायो फेसबुकको सेक्योरिटी एप ?
एजेन्सी – आफ्नो एपस्टोरबाट फेसबुकको ओनाभो सेक्योरिटी एपलाई हटाइदिएको फेसबुकले एप्पलले पुष्टि गरेको छ ।
एप्पलका अनुसार उक्त सेक्योरिटी एपले एप्पलद्वारा तय गरिएको गोपनियता सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना नगरेको एप्पलको भनाइ छ ।
इजरायली एप ओनाभोलाई फेसबुकले सन् २०१३ मा खरीद गरेको थियो । फेसबुकले ओनाभोलाई भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत इन्टरनेट ब्राउज गर्न सकिने सेक्योरिटी एपको रुपमा स्थापित गराएको थियो । यद्यपि, ओनाभो एप आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तथ्यलाई फेसबुकले अहिलेसम्म प्रष्ट रुपमा घोषणा भने गरेको छैन ।
यी हुन् सबैभन्दा तीव्र गतिको इन्टरनेट भएका देशहरु, नेपालको अवस्था कस्तो ?